Kpọtụrụ | Mbubata Cargbọ M | Ndị na-ebubata ụgbọala
Kedu ụgbọ gị?
Ngwa nke ụgbọ
Ebee ka ụgbọ ala ahụ dị?
Thegbọ ala ahụ ọ adịla na United Kingdom?
Ebee Ka isteredgbọ Ala Debanyere Aha Ugbu A?
AD - AndorraAE - United Arab EmiratesAL-AlbaniaAR - ArgentinaNA - AustriaAU - ỌstreliaB - BelgiumBG - BulgariaBH - BahrainBN - BruneiBR - BrazilSite - BelarusCa - CanadaAB - SwitzerlandCL - NkeaCY - SaịprọsCZ - Czech RepublicDE - JamanịDK - DenmarkEE - EstoniaES - SpainFI - FinlandFK - Agwaetiti Falkland (Islas Malvinas)FR - FranceFX - France, Obodo ukwuGB - United AlaezeGg - GuernseyGI - GibraltarGR - GrisHK - Họng KọngNdị ọrụ aka - CroatiaHu - HungaryNJ - IndonesiaBu - IrelandIM - Isle nke MmadụIT - .taliJe - JerseyJP- JapanKR - Korea, NdịdaKW - KuwaitKY - Agwaetiti CaymanLI - LiechtensteinLt - LithuaniaLU - LuxembourgLV - LatviaMC - MonacoMK - MasedoniaMO - MacauMT - MaltaMX - MeksikoMY - MalaysiaNL - NetherlandsMBA - NorwayNZ - New ZealandOM - OmanPH - PhilippinesPL - PolandPT - PọtugalAjụjụ - QatarRO - RomaniaRS - SerbiaRU - RussiaNne - Saudi ArabiaSE - SwedenSG - SingaporeSI - SloveniaSK - SlovakiaNke - ThailandTr - TurkeyTW - TaiwanUS - United StatesVG - Obodo Virgin Islands nke BritainIsii - Virgin IslandsVN - VietnamZA - South AfricaZW - Zimbabwe
Kedu koodu koodu ZIP na America? (Ọ bụrụ na ị maara ya)
Kedu obodo ụgbọ ala ahụ dị ugbu a?
Edebanyere ụgbọala ahụ na UK mbụ?
Owned nwere ụgbọ ala ahụ karịa ọnwa 6 ebe ị bi na mpụga UK karịa ọnwa 12?
Kedu mgbe ị na-eme atụmatụ ịkwaga United Kingdom?
Ugbua na UK1 ọnwa1-3 ọnwa3-6 ọnwaỌnwa 6 +
Dabere na ozi ị nyere anyị nwere ike ịnye gị ọnụahịa a kapịrị ọnụ iji debanye aha ụgbọ ala gị.
Ọnụ ahịa ndị a dabere na afọ ụgbọ ala gị ma ọ bụrụ na ụgbọ ala gị adịlarị na United Kingdom, a ga-enwe mgbanwe ole na ole na nhota ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịga n'ihu, pịgharịa gaa na ala wee kpọtụrụ maka nhota kacha mma.
Biko mara na anyị anaghị ebu ụgbọ ala si Japan ugbu a. Mana anyị nwere ike inye aka na usoro mkpochapụ kọstọm, yana njem n'ime United Kingdom.
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị karịrị afọ iri
Ọnụ ahịa exc VAT
Ọnụ ego Inc. VAT
Ego ọdụ ụgbọ mmiri UK & mkpochapụ kọstọm
Ọnụọgụ a na-ekpuchi ọtụtụ ụgwọ sitere na ọdụ ụgbọ mmiri UK iji bupu akpa ahụ n'ụgbọ mmiri wee kpochapụ ụgbọ ala ahụ. Ego a na-ekpuchikwa ụgwọ ọrụ aka ọ bụla ewetere mgbe a na-ehichapụ ụgbọ ala, dị ka ntinye n'ime usoro kọstọm ike oke ala UK. £ 195.00 £ 195.00
Nrụnye ọkụ n'azụ foogu
Mgbe ọkụ n'azụ ụgbọ ala gị anọghị n'ọnọdụ ziri ezi, ma ọ bụ na-enweghị njirimara a dabara adaba dị ka ọkọlọtọ, anyị na-akwụ ụgwọ iji wụnye ma ọ bụ gbanwee oriọna azụ ka ọ na-agbaso ụkpụrụ nnabata UK. £ 180.00 £ 216.00
Ozugbo ụgbọ ala gị debanyere aha, anyị na-arụpụta nọmba kwesịrị ekwesị maka ụgbọ ala gị. Ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ dị n'ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-adaba ha tupu ịnakọta ma ọ bụ ibuga. Ọ bụrụ na ụgbọ ala ahụ anọghị n'ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-ezigara gị ha yana ihe nrapado maka ịkwado. £ 30.00 £ 36.00
Kọstọm na-ebubata ụgbọ ala m na ụgwọ ndebanye aha
Nke a bụ ụgwọ nchịkwa anyị na-ekpuchi oge na nka anyị n'oge usoro site na mbupu na omenala na ndebanye aha. Anyị na-ahụ na a na-eduzi usoro ziri ezi iji kpochaa ụgbọ ala gị site na kọstọm n'ụzọ ziri ezi nke VAT na ụgwọ ọrụ, yana dejupụta ọtụtụ ụdị kọstọm n'aha gị. Ego anyị na-ekpuchikwa ngwa niile achọrọ ka a nwalee ma debanye aha ụgbọ ala gị site na ọrụ DVLA ngwa ngwa anyị. £ 299.00 £ 358.00
Nnwale MOT bụ nlele ntozu oke ụzọ na UK na ọ dị mkpa ka a gafee ya tupu enwee ike debanye aha ụgbọ ala. Na-esochi ndebanye aha, ụgbọ ala gị ga-achọ MOT kwa afọ ka ọ bụrụ nke iwu kwadoro. £ 55.00 £ 55.00
Ụgwọ ndebanye aha mbụ DVLA
DVLA na-ana ego iji nye akwụkwọ ndebanye aha anyị na-edobere ha, ozugbo ụgbọ gị dị njikere idebanye aha. Nke a bụ ngafe nke sitere na DVLA. £ 55.00 £ 55.00
Nchịkọta sitere na ọdụ ụgbọ mmiri UK gaa na mbubata ụgbọ ala m
Ozugbo emechara kọstọm, anyị na-anakọta ụgbọ ala gị n'ọdụ ụgbọ mmiri site na iji ihe ebufe ma bufee ya n'ụlọ ọrụ anyị maka nnwale na ndebanye aha. £ 225.00 £ 0.00
Ụtụ ụzọ ọnwa 6
Ndị gọọmentị UK na-ana ụtụ isi okporo ụzọ ma achọrọ ya iji kwọọ ụgbọ ala gị n'okporo ụzọ UK. Anyị na-ehota maka ọnwa 6 na ọnụahịa anyị, mana enwere nhọrọ kwa ọnwa 12. Biko mara, ọ bụrụ na ị na-enyocha ọnụego ụtụ okporo ụzọ n'onwe gị, ọnụego ahụ dị iche maka ụgbọ ala ebubata na ọ bụghị otu ụgbọ ala ndị rere ọhụrụ na UK. Ọnụego e hotara ebe a ziri ezi maka ụgbọ ala gị. £ 162.25 £ 0.00
Ọ bụrụ na ụgbọ ala gị erughị afọ 10....
Ọnụọgụ a na-ekpuchi ọtụtụ ụgwọ sitere na ọdụ ụgbọ mmiri UK iji bupu akpa ahụ n'ụgbọ mmiri wee kpochapụ ụgbọ ala ahụ. Ego a na-ekpuchikwa ụgwọ ọrụ aka ọ bụla ewetere mgbe a na-ehichapụ ụgbọ ala, dị ka ntinye n'ime usoro kọstọm ike oke ala UK. £ 195.00 £ 0.00
Ego mbubata ụgbọ ala m na ụgwọ ndebanye aha
Nke a bụ ụgwọ nchịkwa anyị na-ekpuchi oge na nka anyị n'oge usoro site na mbupu na omenala na ndebanye aha. Anyị na-ahụ na a na-eduzi usoro ziri ezi iji kpochaa ụgbọ ala gị site na kọstọm n'ụzọ ziri ezi nke VAT na ụgwọ ọrụ, yana dejupụta ọtụtụ ụdị kọstọm n'aha gị. Ego anyị na-ekpuchikwa ngwa niile achọrọ ka a nwalee ma debanye aha ụgbọ ala gị site na ọrụ DVLA ngwa ngwa anyị. £ 399.00 £ 478.80
Ntụgharị ọsọ ọsọ gaa na MPH
Nke a bụ ihe nnọchi fascia maka ọkpụkpọ ọsọ ọsọ gị site na km/h ruo mp/h. Ọ bụrụ na igwe ọsọ gị nwere ike ịgbanwe site na km/h gaa mp/h dijitalụ, nke a ekwesịghị ịgbanwe, mana ị ka nwere ike chọọ ime ya. £ 199.00 £ 238.80
Nnwale IVA bụ maka ụgbọ ala ndị na-erubeghị afọ 10 na-esikarị na mpụga EU. Nnwale a na-eme na ụlọ nyocha IVA nkeonwe - nke bụ naanị ụdị ya na UK. Nke a na-ebelata nke ukwuu oge nchere ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ nnwale gọọmentị. Ndị DVSA na-ana £199 ahụ ma anyị na-enyefe gị ụgwọ a. £ 199.00 £ 199.00
Ozugbo emechara kọstọm, anyị na-anakọta ụgbọ ala gị n'ọdụ ụgbọ mmiri site na iji ihe ebufe ma bufee ya n'ụlọ ọrụ anyị maka nnwale na ndebanye aha. £ 225.00 £ 225.00
Ndị gọọmentị UK na-ana ụtụ isi okporo ụzọ ma achọrọ ya iji kwọọ ụgbọ ala gị n'okporo ụzọ UK. Anyị na-ehota maka ọnwa 6 na ọnụahịa anyị, mana enwere nhọrọ kwa ọnwa 12. Biko mara, ọ bụrụ na ị na-enyocha ọnụego ụtụ okporo ụzọ n'onwe gị, ọnụego ahụ dị iche maka ụgbọ ala ebubata na ọ bụghị otu ụgbọ ala ndị rere ọhụrụ na UK. Ọnụego e hotara ebe a ziri ezi maka ụgbọ ala gị. £ 162.25 £ 162.25
Onwere ihe ozo ichoro ka anyi mata?
Ozi ndi ozo banyere ihe ibubata gi nwere ike inyere anyi aka ihota nke oma. Eg ị debanyere ụgbọ ala ọ bụla na UK tupu? ... you nwere mgbanwe ọ bụla na ụgbọ ala ahụ, wdg.